HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်အဆိုပါ Marmaray လုပ်ဖို့ရာဖီတီပန်းချီသန့်ရှင်းရေး Kit
07 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
marmaray set ကိုရေးခွသန့်ရှင်းရေးအတွက်လုပ်ရမည်
ရထားကနေ Marmaray ရေးခွ (အများပြည်သူဒိုမိန်းသို့မဟုတ် လုပ်. အများပြည်သူနယ်ပယ်ရုပ်ပုံသို့မဟုတ်စာဖြင့်ရေးသားစာသားကို) နူးညံ့သန့်ရှင်းရေးအတှကျအဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုရဲ့ကြေညာချက်ဟာတရားဝင်ပြန်တမ်းတစ်ခုကြော်ငြာ said: "။ အစုံအလုပ်လုပ် Marmaray ရထား grafitici အားဖြင့်ခြယ်သဟာအပြင်ပန်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်တင်ဒါပါလိမ့်မည်သန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်ထားခံရဖို့ကိုအခြေခံပြီးသန့်ရှင်းရေးဧရိယာထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်ရာ Marmaray မော်တော်ကားစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများညွှန်ကြားမှု,"
နူးညံ့သောဘာသာရပ်, ရှင်းလင်းခံရဖို့ထိုဒေသတွင် 1000 စတုရန်းမီတာသတ်မှတ်ထားသောဖြစ်ပါတယ်။ တင်ဒါ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်စည်၏ညွှန်ကြားမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးအခန်း 14 အောက်တိုဘာလ, xnumx't နာရီအတွင်းကျင်းပမည့်ကြေငြာခဲ့သည်။
TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က အဆိုပါ Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု:
ကားတစ်စီးစောင့်ရှောက်မှုန်ဆောင်မှုများထိုဒေသတွင်အလုပ်လုပ်နေသည့် Marmaray Marmaray ရထားအစုံအတွင်းညွှန်ကြားမှု (Specification အားဖြင့်) grafitici အားဖြင့်ခြယ်သပြင်မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးမှအခွပွေု built သန့်ရှင်းရေးဖြစ်အလုပ်တစ်ခုအိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတင်ဒါပါလိမ့်မည်
တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအဘယ်သူမျှမ: 2019 / 476536
1 - ထိုအုပ်ချုပ်ရေး:
က) လိပ်စာ: TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှု Hoca Pasa Mah ။ Sirkeci ဘူတာ CAD ။ အမှတ်2sirkecifatih / အစ္စတန်ဘူလ်
ခ) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 0212 520 65 75-71487 / 0212 520 65 73
ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: marmarayyonetimihale@tcddtasimacilik.gov.t
2 - အမည်နှင့်အရေအတွက်နုများ၏ကုန်ပစ္စည်းများဘာသာရပ်၏: အ Marmaray ရထားသတ်မှတ်မည်, 1000 mxnumx လယ်ကွင်း-based ဆေးသုတ်ရေးခွများနှင့်သန့်စင် (Specification အားဖြင့်) အလုပ်။
3 - နု၏နေ့စွဲနှင့်အချိန်ကိုဖန်ဆင်းပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာ: TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က ကုန်စည်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်အစည်းအဝေးအခန်း 14.10.2019 ရက်စွဲနှင့်အချိန်အတွက် Marmaray စစ်ဆင်ရေးညွှန်ကြားမှု: xnumx't လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
4 - အထက်ပါဖော်ပြခဲ့တဲ့တင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသုံးမှုပြည်တွင်းလေလံကနေလေလံယူခြင်းအားဖြင့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကထုတ်ပေးသည်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနုတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်တင်ဒါစာရွက်စာတမ်းများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောနေကြသည်။
5 - TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ၏ကမ်းလှမ်းချက်များ Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုကုန်စည်၏ဗျူရိုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်, Hoca Pasa Mah ။ Sirkeci ဘူတာ CAD ။ အမှတ်2Sirkeci-Fatih / အစ္စတန်ဘူလ်လိပ်စာ, ရက်စွဲနှင့်က 14.10.2019 14.00 အချိန်အထိပေးထားရမည်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်လာကြပြီ။
6 - အဆိုပါတင်ဒါစာရွက်စာတမ်း TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc က ရုံးတှငျတှေ့မွငျ Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုကုန်စည်၏ညွှန်ကြားမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးကော်မရှင်။ လေလံတင်သွင်းပါလိမ့်မယ်သူများသည်နုစာရွက်စာတမ်း, အ TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုဝယ်ယူရန်လိုအပ် Marmaray စီမံခန့်ခွဲမှုညွှန်ကြားမှုဘဏ္ဍာရေးရေးရာ, TL ၏ KDV 150,00 ကုန်ကျစရိတ် Teller မှရရှိသောနိုင်ပါသည်အပါအဝငျ။
7 - နိမ့်ဆုံးကိုနူးညံ့စျေးနှုန်းအချိုးအစား၏ 3% တစ်ဦးလေလံချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။
8 - ဤတင်ဒါဥပဒေအမှတ်နူးညံ့၏တားမြစ်ချက်ပြဋ္ဌာန်းချက် မှလွဲ. ရာဇဝတ်မှုနှင့် 4734 နှင့် 4735 မှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး။
3 ရထားဖီတီပန်းချီအနုပညာရှင်လူငယ်အင်္ဂလန် Eze ၌ရှိ၏ 19 / 06 / 2018 တောင်ဘက်လန်ဒန်မြို့တွင်အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့မြို့တော် Loughborough လမ်းဆုံဘူတာ,3လူတွေရထားပျက်ကျမှု၏ရလဒ်အဖြစ်သူတို့၏အသက်ဆုံးရှုံးကြေငြာခဲ့သည်။ ဗြိတိသျှပို့ဆောင်ရေးရဲတပ်ဖွဲ့, မဿဲ Allingham များအတွက်တာဝန်ရှိသူနှစ်ဆယ်၏မြို့တော်ရဲ့တောင်ဘက်လန်ဒန်3ငယ်ရွယ်စဉ်တစ်ကုန်တင်ရထားလုပ်ကြံခံရပြီးနောက်ကွယ်လွန်သွားကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ Loughborough လမ်းဆုံဘူတာအမှန်တကယ်ရာဇဝတ်မှုမြင်ကွင်းတစ်ခုန်းကျင် 07.30 ဒေသစံတော်ချိန်သေပြီမှုန်ရေမွှားဆေးသုတ်ရေးခွ3ငယ်ရွယ်အနုပညာရှင်တွေရှိသည်ဟုယုံကြည်နေသည်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပစ္စည်းများဝယ်ယူ5ကလောင်များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ YHT နူးညံ့သတ်မှတ် 27 / 09 / 2012 အီး ORDER ဌာနတင်ဒါကိုယျစားလှယျညှနျ့စီမံခန့်ခွဲမှုEŞREF FETTAHL တင်ဒါတင်ဒါကိုယျစားလှယျဌာနဗဟိုကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူကော်မရှင်အစည်းအဝေးဖုန်းဖြေရှင်းရန်နှင့်မျှမတို့0312 309 05 15 / 44190312 311 53 05 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 26 / 09 / 2012 လေလံရက်စွဲကိုဖက်စ်နဲ့ TIME က 05 / 11 / 2012 တွင် TIME: 14: 00 SPECIFICATION, PRICE 100 - လေလံနှုန်းအဖှဲ့အစညျး၏နူးညံ့သောအသိပေးစာဖြစ်ပါတယ် malzeme@tcdd.gov.t နုဝယ်ယူရေး FILE ကို NUMBER ကို 2012 / 133851 အီလက်ထရောနစ်စာပို့ ADDRESS ကို YHT SET ပန်းခြံအမှုဆောင်သုံးစွဲခဲ့တဲ့ရန်ဖြစ်ပါသည်၏ subject လေလံ oN ပစ္စည်းများဝယ်ယူရန်5ပစ္စည်းများဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှု: ပစ္စည်းဝယ်ယူရေး ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: HT 65000 အမျိုးအစား YHT အတွက်အသုံးပြုရန် Kit စေ့စေ့စပ်စပ်ဝယ်ယူရမည် 24 / 12 / 2012 HT 65000 အမျိုးအစား YHT ၏ TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုလိမ့်မည်ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေးကော်မရှင် meeting room တယ်လီဖုန်းပစ္စည်းဝယ်ယူရေးရုံးညှနျ့စီမံခန့်ခွဲမှု TUNCAY ငရုတ်ကောင်းနူးညံ့ ADDRESS ကိုဦးခေါင်း CER ORDER ဦးစီးဌာနသတ်မှတ်မည်နူးညံ့သောအထူးကုဌာနအတွက်အသုံးပြုနည်းစေ့စေ့စပ်စပ် Buy နှင့်မျှမတို့0312 309 05 15 / 4149- ဖက်စ်မှ 44190312 311 53 05 ကြော်ငြာနေ့စွဲ 21 / 12 / 2012 နောက်ဆုံးနေ့နေ့စွဲနှင့်အချိန် 25 / 01 / 2013 တွင် TIME: 14: 00 SPECIFICATION ကုန်ကျစရိတ် 100 - တင်ဒါလုပ်ထုံးလုပ်နည်း ON ¨လေလံဒီတင်ဒါ supply FILE ကို NO 2012 / 193333 မေးလ်လိပ်စာ Administration Administration malzeme@tcdd.gov.t ကန်ထရိုက်တိကျတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များဖြစ်ပါတယ် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Kit အဆိုပါ YHT အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ဝယ်ပါဦးမည် 06 / 06 / 2013 Reserve သတ်မှတ်မည်နူးညံ့ Entity ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးချုပ်ဝင်အပေါ်လေလံဆွဲအပိုဒ် 1- xnumx.işပြန်ကြားရေးနှင့်ဆက်နွယ်သည့်အကြောင်းရင်းများထဲမှာအသုံးပြုမှုများအတွက်ဝယ်ယူပါလိမ့်မယ်ထောက်ပံ့ကုန်၏ YHT TCDD ညွှန်ကြားမှုအထွေထွေ; အမည်: TCDD အထွေထွေညွှန်ကြားမှုလိပ်စာ: Talatpaşaရိပ်သာလမ်း 1.1 ရောဂါ-ALTINDAĞ-တူရကီ / တူရကီတယ်လီဖုန်းနံပါတ်: 06330 90.312.309 05 / 15-4419 ဖက်စ်နံပါတ်: 4149 90.312.311 53 e-mail လိပ်စာ: malzeme@tcdd.gov.t ဆက်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အမည်နှင့်အမည်သစ်ကိုရသော NEW -Title: Ümit Arslan ဗျူရိုဦးစီးချုပ်, ဘဏ်ခွဲ Manager ကို Tuncay ငရုတ်ကောင်း xnumx.istekli အထက်ပါလိပ်စာနှင့်နံပါတ်များမှာတာဝန်ခံအတွက်ဝန်ထမ်းများဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်တင်ဒါခေါ်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသတင်းအချက်အလက်ပေးနိုငျခဲ့ပါသညျ။ အပိုဒ် ...
3 ရထားဖီတီပန်းချီအနုပညာရှင်လူငယ်အင်္ဂလန် Eze ၌ရှိ၏
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ပစ္စည်းများဝယ်ယူ5ကလောင်များတွင်အသုံးပြုခံရဖို့ YHT နူးညံ့သတ်မှတ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: HT 65000 အမျိုးအစား YHT အတွက်အသုံးပြုရန် Kit စေ့စေ့စပ်စပ်ဝယ်ယူရမည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အပိုအစိတ်အပိုင်းများ Kit အဆိုပါ YHT အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ဝယ်ပါဦးမည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: အစားထိုးပစ္စည်းများအဆိုပါ MTA 30000 အမျိုးအစားဒီဇယ်မီးရထားအစုံအတွက်အသုံးပြုရန်ဝယ်ယူပါလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: YHT ဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါပျက်စီးခြင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုသတ်မှတ်ရန်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: YHT သတ်မှတ်ရန်အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့အားလပ်ချိန်မှာထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများဖြစ်လိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Siemens ၏ကဖေးများနှင့် YHT ဟာခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးခြင်းပြုပြင်ရေး Kit အတွက်ပေါ်ပေါက်စေခြင်းငှါလက်ခံရရှိလိမ့်မည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Haydarpasa ဆိပ်ကမ်းစစ်ဆင်ရေးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်4သန့်ရှင်းရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အဦများနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ဦးစီးဌာနနှင့်အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပြုသောအမှု